Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Kdom
QAYBTA 1 - WAA MAXAY samaynaa MACLUUMAADKAAGA?
Marka aad iibsato wax ka our dukaanka, oo qayb ka ah geedi socodka iibsiga iyo iibinta, waxaan ururinaa macluumaad shakhsiyeed aad na siiso sida magacaaga, cinwaankaaga iyo cinwaanka email.
Marka aad caleenta our dukaanka, waxaan sidoo kale si toos ah u hesho cinwaanka aad computer ee maamuuska internet (IP) si ay noo siiyaan war naga caawin bartaan oo ku saabsan siiyaa biraawsarkaaga iyo nidaamka qalliinka.
Email marketing (haddii ay khuseyso): Iyada oo aad fasax, waxaa laga yaabaa in aan kuu soo dirno emails ku saabsan dukaan, waxyaabaha cusub iyo updates kale.
QAYBTA 2 - OGOLAANSHAHA
Sidee baad ku heli oggolaanshahayga?
Marka aad na siiso macluumaadka shakhsiga ah si ay u dhamaystiraan macaamil ah, loo xaqiijiyo kaarka deynta, dalban, diyaarin loo gaarsiiyo ama ku soo laabto iibsi, waxaan tusinayaan in aad raali ka ma ururinta iyo aad ugu isticmaalin, waayo, sababta in gaar ah oo keliya.
Haddii aan weydiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed sabab sare ah, sida suuq-geynta, waxaan sidoo kale ku weydiin doona si toos ah oggolaansho ka muujiyay, ama aad siiso fursad ay ku odhan jirin.
Sidee ayaan u baxaan aan ogolaansho?
Haddii ka dib marka aad doorato, aad beddesho maskaxdaada, waad la noqon kartaa oggolaanshahaaga ah in aan kula soo xiriirno, si aan u helno uruurinta joogtada ah, adeegsiga ama shaacinta macluumaadkaaga, wakhti kasta, adigoo nagala soo xiriiraya support@thekdom.com
QAYBTA 3 - BIXINTA
waxaa laga yaabaa in aan u bandhigno macluumaadkaaga shakhsiyeed haddii aan sharcigu u baahan yahay in sidaas la sameeyo ama haddii aad ku xad Terms of Service our.
4 QAYBTA - SHOPIFY
Our dukaanka waxaa marti ku Shopify Inc. Waxay na siiso madal ay e-commerce online in noo ogolaadaa in ay ka iibiyaan badeecada iyo adeegyada aannu idiin nimid.
Your xogta lagu kaydiyaa iyada oo Shopify ee xogta lagu kaydiyo, database ah iyo arjiga codsiga guud Shopify. Waxay ku kaydiso xogtaada on server a secure ka dambeeya brannmur ah.
Haddii aad doorato albaab si toos ah lacag si aad u buuxiso gadashada, ka dibna Shopify kaydiya xogta aad credit card. Waxaa la sameesay oo maraya Card Payment ee Warshadaha Data Security Standard (PCI-DSS). Your xogta macaamilka ganacsi iibsashada waxa lagu kaydiyaa oo kaliya ilaa inta loo baahan yahay si aad u buuxiso macaamil ganacsi iibsashada. Ka dib markii in la dhameeyo, aad macluumaadka macaamilka iibka waa la tirtiray.
Dhamaan albaabada bixinta tooska ah waxay u hoggaansamaan heerarka ay dejisay PCI-DSS sida ay maamusho Guddiga Nabadgelyada ee PCI, kaas oo ah dadaal wadajir ah oo noocyo kala duwan ah sida Visa, MasterCard, American Express iyo Discover.
shuruudaha PCI-DSS sidii loo hubiyo in la baraa ammaan macluumaad credit card by our dukaanka iyo bixiyeyaasha adeegga ay.
Wixii aragti dheeraad ah, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonayaan in ay akhriyaan Shopify ee Terms of Service (https://www.shopify.com/legal/terms) ama Qoraalka Qarsoodiga (https://www.shopify.com/legal/privacy).
QAYBTA 5 - ADEEGYADA SADDEXAAD XISBIGA-
Guud ahaan, bixiyeyaasha dhinac saddexaad loo isticmaalo noo by kaliya ururin doonaa, isticmaalka iyo siino macluumaadkaaga ilaa xadka loo baahan yahay in ay oggolaadaan in iyaga si ay u qabtaan adeegyada ay bixiyaan noo.
Si kastaba ha ahaatee, adeeg bixiyayaasha dhinac saddexaad qaarkood, sida Albaabo bixinta iyo Processor kale macaamil ganacsi lacag bixinta, waxay leeyihiin siyaasadaha gaarka ah iyaga u gaar ah in loo eego macluumaadka aan waxaa looga baahan yahay si ay u bixiyaan iyaga u xawaalad gadashada la xiriira aad.
Waayo, bixiyeyaasha, kuwaas oo, waxaanu kugula talinaynaa in aad akhrisato siyaasadaha gaarka ah ay si aad fahmi karto habka macluumaadkaaga shakhsiyeed la qabtaa by bixiyeyaasha, kuwaas oo.
Gaar ahaan, xusuusnow in bixiyeyaasha qaarkood ku yaalaan laga yaabaa in ama aad qabto xarumaha in yaalaan awood ka duwan adiga ama noo. Sidaas darteed haddii aad doorato inuu sameeyo xawilaad ah in ay ku lug leedahay adeegyada bixiyaha adeegga dhinac saddexaad ah, ka dibna aad macluumaad laga yaabaa inay noqdaan waajib ah in sharciyada awooda (s) taas oo bixiyaha adeegga ama goobaha ay ku yaalaan.
Tusaale ahaan, haddii aad ku yaalaan Kanada iyo macaamil la farsameeyo by albaab bixinta oo ku yaalla Mareykanka ah, ka dibna macluumaadkaaga shakhsiyeed loo isticmaalo buuxinta macaamilka in laga yaabaa in siidaynta sharciga United States, oo ay ku jiraan sharciga Patriot ah.
Marka aad ka tagto website our dukaanka ama waxaa lagu wareejiyey website-saddexaad ama codsiga, kuma sii maamula Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ama Terms our website ee Service.
Marka aad guji links on our dukaanka, waxay laga yaabaa in aad ka our site iska toosin. Waxaan mas'uul ka ah dhaqamada gaarka ah ee goobaha kale ee aan ahayn oo kugu dhiirinaynaa in aad ka akhriyi statements gaarka ah ay.
6 QAYBTA - SECURITY
Si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, waxaan ay qaadaan tallaabooyinka macquulka ah oo raac warshadaha habka xilgudashada ugu habboon si loo hubiyo in waxa la aan habooneyn oo aan laga badiyay, si qaldan, heli, shaacin, badala ama baabbi'iyeen.
Haddii aad na siiso macluumaadka credit card, macluumaad la Windows XP la isticmaalayo technology lakabka godka ammaan (SSL) iyo ku kaydsan leh encryption AES-256. Inkastoo jirin hab la isugu gudbiyo internetka ama kaydinta elektarooniga ah waa 100% ammaan ah, aan raaco shuruudaha oo dhan PCI-DSS iyo hirgelinta heerka warshadaha guud ahaan aqbali dheeraad ah.
QAYBTA 7 - Kukiyada
Halkan waxaa ku qoran liiska cookies in aan u isticmaalno. Waxaan iyaga ku qoran halkan si aad u dooran kartaa haddii aad rabto in aad doorato-out of cookies ama ma.
_session_id, calaamo u gaar ah, ka qaybgala, Kuu ogolaanayaa Shopify ku kaydsan wax warbixin ah oo ku saabsan fadhiga (referrer, bogga soo degtey, iwm).
_shopify_visit, ma xogta lagu qabtay, Baxayn for 30 daqiiqo ka booqashadii ugu dambeysay, Waxaa loo adeegsaday by website our bixiyaha ee stats gudaha tracker si ay u qoraan tirada booqashooyin
_shopify_uniq, xogta ma qaban, ku egyahay saqda dhexe (qaraabo in booqdaha) of maalinta ku xigta, tirsan tirada booqashada dukaan by hal qof macmiil ah.
gaadhigiina, calaamo u gaar ah, joogto ah, waayo, 2 toddobaad, macluumaad Dukaammada ku saabsan waxyaabaha aad gaadhigii.
_secure_session_id, calaamo u gaar ah, ka qaybgala
storefront_digest, calaamo u gaar ah, indefinite Haddii dukaanka uu leeyahay password a, taas waxaa loo isticmaalaa si loo ogaado haddii booqdaha hadda leedahay helitaanka.
8 QAYBTA - DA'DA EE OGGOLAANSHAHA
By isticmaalaya this site, aad wakiil ka nahay inaad tahay ugu yaraan da'da loo badanyahay ee gobolka ama gobolka aad deggan tahay, ama in aad tahay da'da loo badanyahay ee gobolka ama gobolka aad deggan tahay iyo aad na siisay ogolaanshahaaga si loo suurtogeliyo in mid ka mid ah ku tiirsan aad yar si ay u isticmaalaan this site.
9 QAYBTA - isbedel SIYAASADDA ASTURNAANTA THIS
Waxaan xaq u leeyahay inuu wax ka beddelo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti kasta u leenahay, sidaas darteed fadlan si joogto ah dib u eegi. Isbedelada iyo xujooyin saamayn degdeg ah qaadan doonaa marka ay dhajiyay on website ka. Haddii aan wax isbedel ku sameeyo siyaasadda this, waxaan halkan ku wargelin doono in la simay, si aad u ogaato macluumaadka aan ururino, sida aan u isticmaalno, iyo xaaladaha waxa, haddii ay jiraan, in aan u isticmaalno iyo / ama siidayn waxaa.
Haddii our dukaanka waxaa helay ama biirtay shirkadda kale, macluumaadkaaga waxaa laga yaabaa in lagu wareejiyo milkiilayaasha cusub si aan sii wadno waxyaabaha kaa iibiyo.
SU'AALO IYO XIDHIIDHKA WARBIXINADA
Hadaad jeceshahay inaad: marin u hesho, saxaan, wax ka beddesho ama tirtirto wixii macluumaad shakhsi ah ee aan kaa hayno ee ku saabsan, diiwaangeliso ashtako, ama aad si fudud u rabto macluumaad dheeraad ah la xiriir Sarkaalka Isku-Darka Asturnaanta ee support@thekdom.com